တူယှဉ်နွှဲပျော်မဲ့ KMD သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော်…. | Knowledge Management + Decision
တူယှဉ်နွှဲပျော်မဲ့ KMD သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော်….
by adminkmd | Oct 27, 2017 | news |0comments
သီတင်းကျွတ်တော့မဲ့ အချိန်အခါလေးမှာ IT & Mobile ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူလိုသူများ၊ IT နှင့် ပက်သက်သော သင်တန်းများကို တက်ရောက်မည့်သူများအတွက် အထူး Discount Program များစီစဉ်ထားရှိပေးတဲ့ ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် KMD မှာ အစဉ်တစ်စိုက်အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်အားလုံးနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။
KMD ရဲ့သီတင်းကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို 28 September မှ3October အထိ6ရက်တိုင်တိုင် မြေနီကုန်း KMD campus အတွင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာ, မိုဘိုင်းဖုန်း, နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်ငင်းဝယ်ယူလိုသူများ (သို့) အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူလိုသူများအတွက် up to 70% OFF sale လည်းရှိသလို၊ Cashback အစီအစဉ်များ၊ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲနှင့် ဆုလက်ဆောင် အစီအစဉ်များ လည်းရရှိဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ သင်တန်း အပ်နှံမည့်သူများအတွက်လည်း Application & Professional Course အပ်နှံမည့်သူများအတွက် 20% Discount ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင် အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် Level4Diploma in Business IT အပ်နှံမည့်သူများအတွက် 20% Discount ဖြင့် အပ်နှံခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့်နေရာကတော့ အမှတ်(၃၃၁)၊ ပြည်လမ်း၊ မဟာမြိုင်ကားမှတ်တိုင်အနီး၊ မြေနီကုန်းတွင်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း- ၀၁ ၅၀၃၅၁၁ ၊ ၅၀၃၅၂၂ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်ဟုသိရပါသည်။